Ngwọta plasta nke na-agbatị ihe enyemaka nke ịhụ nsọ
Tụgharịa ụbọchị ọ bụla n'ime ụbọchị ka mma-emere maka ụmụ nwanyị na-arọ nrọ maka oge ka mma, enweghị mgbu. Mpe mpe mpe akwa anyị maka ihe mgbu nke ịhụ nsọ na-adị 100% na-enweghị ọgwụ ma na-enye ahụ efe ngwa ngwa. Enweghị ọgwụ, ọgwụ ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ
Ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke okpomoku - patches anyị na -ewepụta ezigbo okpomọkụ iji mee ka akwara akpa nwa gị belata ma mụbaa ọbara maka ịdị mfe nke ịhụ nsọ nwanyị.
EZIGBO & ỌTỤTA N'AGBANYA! - Kaadị kpo oku anyị ergonomic maka ihe mgbu oge na -arapara na afọ gị ma ọ bụ panti maka ahụ mgbu oge mgbu mgbu. Site na nrapado ndị Japan dị mma na akwa na-enweghị akwa, ị ga-enweta nkasi obi ọbụlagodi mgbe ị na-aga
Aha: Ihe Enyemaka Enyemaka Ọnwụ Ndị Nwaanyị
Ngwugwu: 3 pcs/setịpụ*tapawa obí eze
Akụrụngwa Ngwa: Ọ dabara na mkpakọ na -ekpo ọkụ dị n'okpuru afọ nke ụmụ nwanyị maka iwepụ oyi na ikpo ọkụ, na ahụ erughị ala n'oge dysmenorrhea.
Sinensis, Radix Paeoniae Alba, Rhizoma Zingiberis, Flos Carthami, akwa na-enweghị akwa, akwa mkpuchi.
Igwe ntụ ntụ, Carbon na -arụ ọrụ, Vermiculite, Nnu anụ ahụ, mmiri, wdg
ECHICHE KWESỊRỊ KWESỊRỊ.Mee ka ihe mgbu jụọ oyi ebe ị kacha chọọ ya. Ihe nkpuchi a na -ejigide uwe ime gị yana akụkụ ahụ gị iji nye ahụ mgbu mgbu na -adịgide.
NTỤTARA ogologo oge. Ihe ndị dị ike na eke iji mee ka ihe mgbu oge gị na -egbu mgbu ruo awa asatọ.
OGWU NA-ECHICHE KRAP. Ihe ọ fromụ fromụ sitere na akwụkwọ osisi rasberi, mgbọrọgwụ dandelion na ogbugbo ogbugbo na -enyere aka belata nfụkasị ahụ, kwalite ọbara ọgbụgba ma mee ka uru ahụ kwụsị.
1. Maka iji mpụga, tinye ya na afọ ala. A na -atụ aro itinye ya na isi Guanyuan, isi Qihai na isi Shenque.
2. Mepee ngwugwu, wepụta ngwaahịa ahụ, dọpụ akwụkwọ ntọhapụ wee rapara na akụkụ ndị dị mkpa. Mgbe ihe dị ka nkeji iri atọ, ọ bụrụ na oke ahụ dị oke elu, dọka ihe nyado njikwa okpomọkụ, dobe ya na etiti azụ ngwaahịa a, rapara ya nke ọma na kọmpat.
1. Ngwaahịa a bụ maka mpụga, ọ bụghị maka ọnụ, ojiji nke enwere ike ịtụfu.
2. Ngwaahịa a na -ekpo ọkụ mgbe emepere ya. Emeghela akpa ahụ na -ejighị ya.
3.Ọ bụrụ na oke okpomọkụ dị oke elu n'oge a na -eji ya, ọ bụrụ na ejiri ya n'abalị ma ọ bụ kechie akwa ahụ ka ọ jidesie ike, biko rapara ihe nkwụnye akara okpomọkụ na azụ ngwaahịa ahụ iji gbochie ọkụ ọgbụgba.
4. Ejila ngwaahịa a maka ihe nfụkasị ahụ, ụmụ nwanyị dị ime, ọrịa shuga, ọrịa akpụkpọ na nsogbu ịkwa ọbara.
Pero dị mkpa: Afọ atọ
Nke gara aga: Ngwọta plasta arụrụ arụ nke ahụike ọrịa shuga
Osote: Ngwọta plasta arụrụ arụ
Ihe mgbochi okpomoku maka enyemaka mgbu
Ihe enyemaka enyemaka mgbu mgbu ikpere
Ihe mgbu mkpụrụ ego enyemaka
Ihe enyemaka enyemaka mgbu
Akara enyemaka ihe mgbu
Mgbachi Mgbu Mgbapụta mgbaama
Ngwọta plasta arụrụ arụ nke ahụike ọrịa shuga
Ahịhịa enyemaka ihe mgbu
Medical Jụrụ jel Patch-arụ ọrụ plasta Ya mere ...
36 Ọkpụkpụ Pimple Pimple-Ngwọta plasta arụ ọrụ
Ihe nkedo mgbu mgbu ikpere-Ngwọta plasta arụ ọrụ
Ngwọta plasta arụrụ arụ